သင့်အတွက် မနက်ဖြန်: Missing Language Barကို ဘယ်လိုဖြေရှင်းမှာလဲ?
Missing Language Barကို ဘယ်လိုဖြေရှင်းမှာလဲ?
ဒီမှာ မိတ်ဆွေတို့ တချို့သော Windows XP PCမှာ Language Bar ပျောက်နေတယ်။ Taskbarမှာ ဖော်လို့လည်း မရ။ Control Panel > Regional and Language Options > Language tab > Details > Preferences > Language bottonလည်း Missingဖြစ်နေတယ်။ ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲ။ Language Bar မပေါ်ရင် Zawgyi Unicodeလည်း ဒုက္ခရောက်တာပေါ့။ Bloggerသမားတွေသာမက Zawgyi fontနဲ့ စာရိုက်သူတွေလည်း ခေါင်းကိုက်ရပါတယ်။ ခက်တာပဲ သိပ်အလုပ်ရှုပ်တယ်။ ဖြေရှင်းချက်လေးတွေ အခုတင်ပြလိုက်ပါတယ်။
၁။ Control Panel > Regional and Language Options > Language tab > Detailsကို နှိပ်လိုက်ပါ။
၂။ ပေါ်လာသော Dialog Box မှ Advanced tabကိုနှိပ်ပါ။ ရှိသမျှ အမှန်ခြစ်ပြထားသော Checkboxကို အမှန်ခြစ်ဖြုတ်ပါ။
၄။ Setting tabကို ပြန်သွားပြီး။ Perferences အောက်မှ Language Bar Bottonကို နှိပ်ပြီး Show Language Bar on the Desktopကို အမှန်ခြစ် ပြလိုက်ပါ။ ဒါဆို Desktopမှာ Language Bar ပေါ်လာပါပြီ။ Taskbarမှာ အထားအသိုလုပ်ပါ။ ဒါဆို Overcomeဖြစ်ပြီ။
PaPa on July 8, 2009 at 7:44 PM said...
ayethander on July 8, 2009 at 8:01 PM said...